Tyson dagaalkii soo laabashada wuxuu ku dhamaaday barbaro kulankii Roy Jones – AfmoNews
“Mararka qaar labada daqiiqo waxay dareemeen sidii seddex daqiiqo,” ayuu yiri Tyson. “Waan ku faraxsanahay inaan tan ku helay suumankayga waxaanan rajeynayaa inaan markale sameeyo.”
Gudi “aan rasmi ahayn” oo ka tirsan horyaalkii hore ee Golaha Feerka Adduunka ee ringide ayaa barbareeyay ciyaarta, natiijada Tyson u sacab tumay inkasta oo ay u muuqato in ay xukuntay.
“Waan ku fiicanahay taas,” ayuu yiri Tyson, isagoo qirtay inuu u maleynayay inuu ku guuleystay dagaalka. “Haa, laakiin waxaan ku fiicanahay barbaro. Dadwaynuhu way ku farxeen taas. ”
“Marnaba kuma faraxsani barbaro. Ma sawirayo, ”ayuu yiri Jones, isagoo qiraya in Tyson uu ku dhaawacmay isaga intii uu socday dagaalka, gaar ahaan jugta jirka.
“Haddii uu kugu dhufto madaxaaga, dharbaaxo, xabad jirka ah, dhib malahan, wax walba way ku xanuujinayaan. Rasaasida jirka ayaa dhab ahaantii qaadatay qasaaro. Rasaasida jirka waa waxa ku daala.
“Waxaa jira wax halkaas ka jira oo ka qaadanaya garaacista Mike,” ayuu yiri Jones. “Marka aan halkaa joogo, waxaan ahay ciyaar. Waxaan tagayaa dhamaadka. Waan ogahay markuu i garaaco, inay wax yeeleyso.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan tago sideed jeer,” ayuu yiri Tyson. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fogaado.
“Tani way ka weyn tahay u dagaallanka horyaalnimada,” ayuu yiri Tyson. “Hadda dadka waan caawiyaa.”